यो एक अतिथि योगदान गरेर Pavlos Sideris, को संस्थापक NoWagering.यदि तपाईं हुनेछ जस्तै पेश गर्न योगदान सम्पर्क गर्नुहोस् बिल Beatty अधीनमा लागि विवरण । धन्यवाद । अनलाइन क्यासिनो उद्योग मा भएको छ, केहि को एक उन्मादी मा हाल महिना को एक नम्बर निम्न गम्भीर चेतावनी द्वारा जारी बेलायत गरेको प्रतियोगिता र बजार अख्तियार । यो चेतावनी पछि आए CMA मा एक अनुसन्धान शुरू "whether अनलाइन जुवा कम्पनीहरु उपचार गर्दै आफ्नो ग्राहकहरु एकदम।" जांच पछि चिन्ता खडा गरेर जुवा आयोग "बारे भ्रामक प्रचार र अन्याय सर्तहरू द्वारा प्रयोग भइरहेको कम्पनीहरु ब्लक गर्न खेलाडी' भुगतान." लाइसेन्स अवस्था आवश्यकता "सबै लाइसेन्स जुवा संचालक समावेश गर्न आफ्नो विज्ञापन कुनै पनि महत्वपूर्ण सीमितता गर्न सम्बन्धित प्रचार जोगिन भ्रामक उपभोक्ताहरु।" तर, ठीक विपरीत थियो मामला हुन, र रूपमा Sarah Harrison जुवा आयोग प्रमुख कार्यकारी उल्लेख: "म जारी गर्न चिन्ता छ कि यी थुप्रै [नियम र अवस्था] देखा bamboozle भन्दा मदत ग्राहक." अत्यधिक Wagering आवश्यकताहरु को अन्याय सर्तहरू हद सम्बन्धित अत्यधिक wagering आवश्यकताहरु लागू गर्न बोनस र मुक्त spins द्वारा चढाएको क्यासिनो प्राप्त गर्न नयाँ खेलाडी । आवश्यकताहरु कि राज्य खेलाडी पर्छ wager आफ्नो बोनस रूपमा धेरै 40 पटक भन्दा पहिले तिनीहरूले अनुरोध गर्न सक्छन् एक फिर्ती को कुनै पनि जीत देखि परिणामस्वरूप । This makes it व्यावहारिक असम्भव लागि एक खेलाडी वास्तवमा केहि जीत, वा कम से कम फिर्ता केहि तिनीहरूले जीत सक्छ पाला क्यासिनो सुपर बाउल पार्टी. Wagering अवस्था संग सम्बन्धित मुक्त spins छन् crueler अझै पनि, जो सामान्यतया stipulate कि कुनै पनि जीत देखि व्युत्पन्न मुक्त spins हुनुपर्छ wagered 40 पटक भन्दा पहिले तिनीहरूले हुन सक्छ ि म.ई । एक खेलाडी हुनेछ wager एक थप £4,000 सक्षम हुनु अघि फिर्ता गर्न £100 मा जीत.एक 40X wagering आवश्यकता छ उद्योग औसत, तर यो असामान्य छैन हेर्न केही बोनस बोकेको एक 50X वा 60X wagering आवश्यकता छ । यसबाहेक, यो अवस्था स्पार्क भन्ने चिन्ता खेलाडी बाध्य भइरहेका छन् गर्न बढी समय खर्च मा जुवा क्रम पूरा wagering आवश्यकताहरु भन्दा, रोक्न जुवा र नगद-मा बाहिर एक समय हुनेछ जो व्यावहारिक र जिम्मेवार । नियामक दबाव CMA चेतावनी थियो छिट्टै पछि एक नम्बर को गंभीर दस्तुर द्वारा जारी जुवा आयोग.
Bgo मनोरञ्जन थियो fined £300,000 लागि भ्रामक विज्ञापन; 888 होल्डिंग्स थियो fined £7.8 m लागि असफलता को आफ्नो हैंडलिंग कमजोर ग्राहकहरु; र मात्र यो हप्ता, चाड अन्तरक्रियात्मक थियो fined £2.3 m breaching लागि नियमहरु जो जोगाउन उपभोक्ताहरु । उद्योग प्रतिक्रिया द्वारा भनेर सुनिश्चित महत्वपूर्ण मामला थिए स्पष्ट र निडर भई communicated सँगसँगै आफ्नो प्रवर्धनहरू । तर, आफ्नो दायित्व सबै विस्तार विज्ञापन, ती सहित प्रकाशित गरेर आफ्नो सम्बन्धित निकाय, संचालक कार्य थियो सुनिश्चित को आफ्नो सहयोगी पनि थिए अनुरूप छ । बोझ transpired हुन लागि पनि धेरै आकाश शर्त गरेको संबद्ध कार्यक्रम, जो तुरुन्त बन्द, सेप्टेम्बर मा समाप्त ठेके संग यसको सम्बद्ध साथै आफ्नो आयोगहरु पाला क्यासिनो स्पा सहारा मूल्यहरु. Bgo लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण बन्ने अनुरूप छ । तिनीहरूले स्क्राप आफ्नो wagering आवश्यकताहरु पुरा अर्थ, कि खेलाडी सक्छ झिक्न आफ्नो जीत देखि परिणामस्वरूप मुक्त spins र बोनस तुरुन्तै बिना, कुनै जायका, र कुनै पनि बिना कुनै जटिल मामला संग contend पाला क्यासिनो स्पा सहारा san diego.
Wager-मुक्त क्यासिनो हुँदासम्म Bgo पहिलो मुख्यधारा ब्रान्ड स्विच गर्न एक पुरा wager-फ्री मोडेल, यो छैन पहिलो चलाउँछ, सादगी र महत्वपूर्ण कुरा, निष्पक्षता गर्न सादर संग प्रवर्धनहरू । धेरै नयाँ ब्रान्ड शुरू हालैका वर्षहरूमा मा पनि एक अपनाए wager-मुक्त दृष्टिकोण छ । PlayOJO गर्व छ "कुनै wagering, केहि मा, कहिल्यै"; mFortune भनेर प्रतिज्ञा "सबै जीत हुनेछ मा राखिएको cashable क्रेडिट and can be withdrawn कुनै पनि समय मा"; Kaboo प्रदान गर्दछ "wager-मुक्त जीत मा बोनस spins"; र भाग्यशाली Niki प्रदान गर्दछ "no wagering मुक्त spins." पनि विलियम हिल हालै शुरू wager-मुक्त spins को भाग रूपमा यसको स्वागत प्रदान.कि यो वास्तवमा एक प्रवृत्ति वा केवल एक अस्थायी आला देख्न गर्न रहिरहन्छ, तर दबाव संग, स्पष्ट माउन्ट मा संचालक रूपमा राम्रो तरिकाले आफ्नो सम्बद्ध it wouldn ' t be अव्यावहारिक आशा गर्न अधिक सूट पालन गर्न, कम से कम गरेर पुनर्विचार आफ्नो अधिग्रहण प्रदान गर्दछ.रूपमा Bgo गरेको CFO हन्नाले Westley उल्लेख गरेको छ, त्यो सम्झनुहुन्छ "जब एक 100% खेलमा बोनस संग एक 20x बारी आवश्यकता थियो मानक कैसिनो साइन-अप प्रस्ताव" र "अब हामी देखेर छन्, 200%'s, 400%'s, कुनै जम्मा बोनस, free spins, उच्च बारी आवश्यकताहरु, अधिकतम बाजी र कम/गैर योगदान खेल।" वृद्धि मा खेलाडी शिकायत मा हाल को वर्ष मा पनि हुन सक्दैन बेवास्ता, जो अक्सर सम्बन्धित wagering आवश्यकताहरु र प्रतिबन्धको छ । खेलाडी गुमाउने छन् भरोसा मा कैसिनो बोनस र प्रवर्धनहरू, र त यो पनि छैन अव्यावहारिक आशा गर्न तिनीहरूलाई गर्न अन्ततः बाहिर खोज्न भरोसायोग्य क्यासिनो संग, निष्पक्ष र पारदर्शी सर्तहरू छ । लेखक बारे: Pavlos Sideris छ संस्थापक को NoWagering, मात्र समर्पित स्रोत को कुनै wagering क्यासिनो, र बोनस कम संग wagering आवश्यकताहरु । नवीनतम प्राप्त जुवा देखि समाचार केल्विन Ayre ठोस पोकर मिसिन मूल्य सूची.
पाला क्यासिनो स्पा सहारा मूल्यहरु
ठोस पोकर मिसिन मूल्य सूची